११७ वर्षदेखि निरन्तर बलिरहेछ एउटै बल्ब ! « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
११७ वर्षदेखि निरन्तर बलिरहेछ एउटै बल्ब !
बिजुलीको एउटा बल्बले सामान्यतया कति वर्षसम्म काम गर्ला ? बल्ब कम्पनीले दुई–तीन वर्षको वारेन्टी दिन्छन् । तर, एउटै बल्ब ११७ वर्षदेखि निरन्तर बलिरहेको छ भन्ने सुन्दा जोसुकैलाई अचम्म लाग्ला । हो, क्यालिफोर्नियाको लिभरमोर सहरमा एउटा बल्ब ११७ वर्षदेखि बलिरहेको छ । त्यहाँको एक दमकल केन्द्रमा सन् १९०१ मा उक्त बल्ब जडान गरिएको थियो । अहिलेसम्म सो बल्ब बलिरहेको छ । चार वाट बिजुलीबाट चल्ने बल्बको फ्युज यति लामो समयसम्म गएको छैन । जबकि बल्ब चौबिसै
दमकल केन्द्रमा काम गर्ने कर्मचारीका अनुसार १९३७ मा पहिलोपटक बिजुलीको लाइन बदल्दा बल्ब बन्द गरिएको थियो । तार बदलेपछि पुनः बल्ब बाल्न सुरु गरियो र अहिलेसम्म बलिरहेको छ । २००१ मा सांगीतिक कार्यक्रमका साथ पार्टी आयोजना गरेर बल्बको १००औँ जन्मदिन मनाइएको थियो ।
पछिल्लो तीन दशकयता बल्ब हेर्नका लागि कैयौँ मान्छे पुग्ने गरेका छन् । बल्ब आफैमा एक म्युजियमजस्तो बनेको छ । हाल बल्बनजिकै एउटा वेब क्यामेरा पनि निगरानीका लागि राखिएको छ । २०१३ मा सीधा प्रसारण लाइनमा जोडिएपछि बल्बको फ्युज गएको खबर आएको थियो । नया पत्रिकाले छापेको छ ।
तर, पछि बुझ्दा बल्ब नबिग्रिएको देखियो । जबकि त्यतिवेला बिजुली वितरण गरिएको ७६ वर्ष पुरानो लाइनमा खराबी आएको थियो । लाइन मर्मत गरेपछि बल्ब पुनः सञ्चालनमा आयो । बल्ब गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा पनि सामेल छ ।
भारतको तटीय क्षेत्रमा सामुद्रिक आँधीबाट एघारको मृत्यु
चेन्नाई, ३० कात्तिकः भारतको तटीय क्षेत्रमा शुक्रबार आएको भीषण सामुद्रिक आँधीमा परी कम्तीमा ११ जनाको
खमेर रुजका दुई नेता नरसंहारमा दोषी ठहर
नोमपेन्ह, ३० कात्तिकः कम्बोडियाका खमेर रुज शासनकालका दुईजना उच्च नेताहरु जातीय नरसंहारमा दोषी भेटिएको छ
प्राविधिक अध्ययनपछि बेरोजगार बस्नु नपर्ने भएकाले विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो
३० कातिक – पछिल्लो समय जिल्लामा प्राविधिक शिक्षाप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको छ । अध्ययनपछि
सुर्खेतमा मौसमी राडार प्रयोगमा
३० कात्तिक – डुबान र बाढीको समस्या भोग्दै आएका पश्चिम तराईवासीको सुरक्षाका लागि मौसमी राडार